चर्चित कलाकार लक्ष्मी गिरीलाई फेरी किन रुँदै हिँड्नु पर्यो ? – Sandesh Press
June 16, 2021 413
चर्चित कलाकार लक्ष्मी गिरीलाई फेरी किन रुँदै हिँड्नु पर्यो ? बुढेसकालमा यसरी आँशुका धारा बगाउँदै हिँड्दा पनि न्याय पाइन् लक्ष्मीले, आखिर के समस्यामा छिन् लक्ष्मी ?यो पनि,रुपा सुनार पेशाले पत्रकार हुन् । उनीमाथि जातकै आधारमा बिभेद भएको छ । उक्त कुरा उनले फेसबुक मार्फत सार्वजनिक गरेकी हुन् । उनले फेसबुकमा उक्त बिषयबारे एक भिडियो राखेकी छिन् । भिडियोमा उनी कोठा भाडामा खोज्न गएको, एक घरको कोठा मन परेको र भाडा र सबै कुरा मिलिसकेपछि जातकै आधारमा पछि घरबेटीले बस्न नदिएको दुखेसो उनले भिडियोमा बताएकी छिन् ।
Prevनायिका श्वेता भन्छिन्, ‘काठमाडौंलाई पानीको प्यास मेटाएर आँशुको भेलमा डुबेकी मेलम्चीलाई सहयोग गरौं’
Nextआफ्नो श्रीमान माधव भण्डारीलाई मेलम्चीको बाढीले बगाए पछी श्रीमती नाबालक छोरालाई अंगाल्दै भक्कानिइन (भिडियो)